डिसहोममा दसैं-तिहार अफर | .:: Welcome || Paryatannews
Home » अर्थ » डिसहोममा दसैं-तिहार अफर
डिसहोममा दसैं-तिहार अफर
काठमाडौं । डिटिएच सेवाप्रदायक कम्पनी डिसहोमले आउंदो दसैंतिहारलाई लक्षित गरी ‘३ हजार छुट यसपालि, बजाऔं ताली’ उपभोक्ता योजना सुरु गरेको छ । भदौ २० देखि योजना सुरु गरिएको जनाएको छ । योजनाअन्र्तगत हाल ५ हजार ९ सय ९९ बजार मूल्य कायम भएको डिसहोमको एचडी कनेक्सनमा ३ हजार छुट दिई २ हजार ९ सय ९९ रुपैयांमा उपलब्ध गराइएको छ ।
२ हजार रुपैयांभन्दा माथिको रिचार्ज गर्ने सम्पूर्ण ग्राहकका लागि पनि बोनस व्यवस्था गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित डिटिएस सेवाप्रदायक डिसहोमले नेपालभर सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कम्पनीका अनुसार, नेपालको भौगोलिक बनावटमा उपयुक्त प्रविधि विनातार जुनसुकै ठाउंमा पनि सहजै जडान गर्न सकिन्छ । सीधै स्याटेलाइटमा आबद्ध प्रविधि भएको हुंदा ध्वनि र दृश्य दुवै गुणस्तरीय रहेको कम्पनीको दाबी छ ।
डिसहोमले १६ वटा एचडी च्यानल तथा ९० वटा एसडी च्यानल प्रसारण गर्दै आएको छ । कम्पनीका नेपालभर ८ सय डिलर र २ हजारभन्दा बढी सबडिलर छन् ।
डिसहोममा दसैं-तिहार अफर Reviewed by Shiva Shrestha on Sep 18 . काठमाडौं । डिटिएच सेवाप्रदायक कम्पनी डिसहोमले आउंदो दसैंतिहारलाई लक्षित गरी ‘३ हजार छुट यसपालि, बजाऔं ताली’ उपभोक्ता योजना सुरु गरेको छ । भदौ २० देखि योजना सुरु काठमाडौं । डिटिएच सेवाप्रदायक कम्पनी डिसहोमले आउंदो दसैंतिहारलाई लक्षित गरी ‘३ हजार छुट यसपालि, बजाऔं ताली’ उपभोक्ता योजना सुरु गरेको छ । भदौ २० देखि योजना सुरु Rating: 0